China High Quality Cardboard Paper Gift Box Manufacturing and Factory |SIUMAI
Boatin-taratasy fanomezana baoritra avo lenta
Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fonosana boaty fanomezana avo lenta sy ny boaty famonosana mahazatra.Ny boaty fanomezana dia matetika mampiasa baoritra volondavenona ho toy ny fonony mba hamoronana fototra mafy ho an'ny boaty fanomezana.Ny ivelany dia matetika nofonosina ambonin'ny fanontam-pirinty tsara tarehy na taratasy manokana.Ny boaty fanomezana avo lenta dia mampitombo ny lanjan'ny vokatra amin'ny lafiny iray, tsy vitan'ny hoe manatsara ny vokatra, fa manintona ny mpanjifa ihany koa.Ao amin'ny dingan'ny fanamboarana boaty fanomezana, ny asa tanana matetika mifidy marika mafana stamping, lamina uv ary asa tanana hafa mba hanehoana ny kalitao avo lenta.
Style Ny fitaovana rehetra sy ny karazana boaty dia azo amboarina
Size Rehetra habe manokana misy
MOQ Matetika 1000 pcs, azafady mailaka ho an'ny habetsahana manokana
pirinty natao tamin'ny Loko CMYK, lokon'ny Pantone
Options tafiditra Die fanapahana, Gluing, Perforation, andriamby, kofehy, EVA, lovia plastika, sponjy, PVC / PET / PP varavarankely, Die fanapahana, Gluing, Perforation, sns.
famaranana Lamination, varnishing, volamena / volafotsy foil, mafana stamping, embossing, debossing, UV / namboarina
teny nalaina Ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fanamafisana ny fitaovana, ny habeny, ny habeny, ny atiny vita pirinty ary ny antsipiriany
Fitaovana taratasy ivelany
Modely tsara tarehy, lahatsoratra mazava, tsy misy loko miloko Mifidiana tsara ny fitaovana avo lenta, ny kalitaon'ny vokatra dia hita amin'ny sary tena izy.
Malambo ny etỳ ambonin'ny tany, fisaka ny asa, ary matanjaka ny fampiharana azy.
1. Raha tsy fantatrao ny fomba famonosana ny vokatrao, dia hanome fonosana sahaza ny vokatrao izahay.Ampifandraiso ireo singa malaza farany eny an-tsena ary ampidiro ao amin'ny foto-kevitra famolavolana hamorona dokam-barotra maimaim-poana ho an'ny vokatrao.
2. Raha manana teti-bola ianao, dia hifidy fitaovana mety amin'ny famolavolana ny fonosanao izahay, ary hamolavola ny boaty famonosana lafo indrindra ao anatin'ny teti-bola.
3. Raha manana fonosana voavolavola tsara ianao, dia hanamboatra ny fonosana avo lenta mitovy aminao izahay.
1. Fanamarinana maimaim-poana.Aorian'ny fametrahana baiko amin'ny famokarana araka ny drafitra famolavolana, dia haverina feno ny saram-panamarinana.
2. Ny tena orinasa.Ny fananganana serivisy tokana dia manamora ny fampiasana ny sehatra ara-toekarena.Ampio ny mpanjifa hahazo ny vokatra lafo indrindra.
3. Famolavolana maimaim-poana.Manome serivisy famolavolana tokana.Ny mpamorona dia mifandray amin'ny mpanjifa tsirairay amin'ny antsipiriany, mampihatra tsara ny fepetra takian'ny mpanjifa tsirairay, manome soso-kevitra sy serivisy fanovana aorian'ny fanovana, ary mamaha olana toy ny fahatarana amin'ny famolavolana sy ny fifandraisana ratsy mandritra ny fanovana endrika.
4. fiantohana ny fotoana fanaterana.Fonosana tanteraka ary azo alefa miaraka amin'ny kalitao sy ny habetsahana ao anatin'ny fe-potoana voatondro.
5. UV ranomainty avo lenta.Ny ranomainty UV dia tsy misy solvents mivadibadika, izany hoe 100% tsy misy solvent, noho izany dia tsy avoaka eny amin'ny rivotra ny volatile organika mandritra ny dingan'ny fanontana, izay mifanaraka amin'ny fikatsahana ny fiarovana ny tontolo iainana.
- Omeo porofo maimaim-poana mandritra ny 1-3 andro ianao
- Teny fohy: ao anatin'ny 24 ora
-Fanaterana fohy: 7-15 andro
-Ny orinasa iray manontolo dia mampiasa fitaovana famokarana mandeha ho azy tanteraka sy fitaovana fanontam-pirinty nomerika miaraka amin'ny fitantanana loko voadio
-ERP rafitra fitantanana, ara-tsiansa manara-maso ny famokarana ny vokatra
-Quality vokatra sy QC roa kalitao sampling fisafoana
- Serivisy mahomby sy haingana aorian'ny varotra
Na avelao ny hafatrao:
teo aloha: Boatin-taratasy fanomezana baoritra avo lenta
Manaraka: Boatin-taratasy fanomezana baoritra avo lenta
Savony Kraft Paper Box Fanontam-pirinty Savony Paper Packag...
Finday LCD Touch Screen Phone Assembly Pa...
Medical fandidiana saron-tava boaty saron-tava fitehirizana boaty saron-tava ...
Customized Design Full loko volamena Foil Beauty P ...
SIUMAI Corrugated boaty fandefasana entana mahazatra ...